Home Wararka Itoobiya iyo Eritereeya oo kulamo qarsoodi ah la qaatay saraakiil ka socoto...
Itoobiya iyo Eritereeya oo kulamo qarsoodi ah la qaatay saraakiil ka socoto Famraajo
Wararka ka imaanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in uu Bakaal Kooke uu xalay kasoo degay garoonka Addis Ababa ee xaruunta Dalka Itoobiya.
Safarka aan la shacanin u xalay Bakaal Kooke ku tagay Itoobiya, wuxuu magaalada Addis Ababa kula kulmay saraakil Itoobiyan iyo kuwa Eritrean oo horay ugu suugnaa magaalada Addis Ababa, waxaana la sheegay in uu kulaanka ku saabsanyahay sidii loo deejin lahaa xiisada ka dhalatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee la geeyay jiida hore, kuna dhintay dagaalka ka socda gobolka Tigreega oo gudaha Somalia iyo Calaamka aad looga hadal hayo.
Bakaal Kooke oo ah taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo ayey xukuumada Federalka ariintan u wakiishay taasoo keentay in saxaafada iyo bulshada laga qariyo safaarka qaradoodi ah ee u Bakaal Kooke ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya.
Degmada Dollow oo katirsan gobolka Gedo ayaa xaruun u ah Bakaal Kooke, waxaana garoonka Dollow marar badan laga soo dejiyay dhalinyaro badan oo lagu soo tabaray dalka Eritrea, iyo kuwa badan oo loo qaaday Eritrea, waxana la sheegay sida awgeed ayey dowlada federalka u wakiishay Bakaal Kooke, madaam u wax badan ka ogyahay ariintan.
Wixii warar ah ee soo kordha la soco Halgan Media.